Dacwada dhacdadii ugu yaabka badneyd oo maanta lagu qaadayo maxkamadda Hargeysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dacwada dhacdadii ugu yaabka badneyd oo maanta lagu qaadayo maxkamadda Hargeysa
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa sheegaya in maxkamadda magaaladaasi ay maanta qaadeyso mid ka mid ah kiisaskii ugu yaabka badnaa ebid ee ka dhex dhaca bulshada Soomaaliyeed.
Muddo todobaadyo kahor ayaa waxaa degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ka dhacday arrin fajac leh kadib markii lamaane halkaasi isku guursaday ay arrin layaab leh kala qabsatay.
Wiilka aroosay gabadha ayaa la sheegayaa inuu ahaa qof ka shaqeeynayay mid ka mid ah foornooyinka rootiga sameeya, waxaana uu shaqada gali jiray xilliga arroortii ah.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkaasi xanuunsaday, wuxuuna ka joogay shaqadii, waxaana dhacday in isagoo ku sugan qolkiisa gaarka ah uu maqlo cod rag ah, wuxuuna xilligaasi u yeeray xaaskisa, isagoona weydiiyay ninka ka hadlaya ee guriga jooga, waxayna u sheegtay inay tahay saaxiibadeeda oo todobba bixinta ugu timid.
Jawaabtaasi oo wiilka ku qanci waayay ayaa si toos ah u aaday saldhigga booliska ee degmada Axmed Dhagax, wuxuuna saldhiga ku wargeliyay in gurigiisa uu rag joogo islamarkaana uu doonayo in askar lagu darro, si ay usoo hubiyaan.
Askartii ayaa markii ay guriga yimaadeen waxaa gabadha todobadda bixineysay arooska islamarkiiba lagu amray inay indha shareerka iska qaado, si loo aqoonsado qofka ay tahay, balse waxaa arrin fajac noqotay kadib markii uu halkaasi kasoo dhex muuqday qof rag ah.
Askartii ayaa islamarkiiba xabsiga dhigay gabadhii aroosadda aheyd iyo ninkii ay haweeneyda ku sheegtay, waxaana markii ay booliska weydiiyeen sababta ay sidaan u sameeysay ku jawaabtay; “Ninka i qaba oo saxda ah waa midka haatan ila xiran”, taas oo fajac ku noqotay ninka arooska ku cusbaa.
Maxkamadda magaalada Hargeysa ayaa lagu wadaa inay maanta qaaddo kiiskaan layaabka leh ee horyaala, waxaana hadal heynta ugu weyn ee magaaladaasi ay maanta tahay dhacdadaan ka mid ah dhacdooyinka naadirka ah uguna yaabka badan ee ka dhaca magaaladaas.